Registry လေ့လာခြင်း အပိုင်း (၁) ~ မျိုးကို
Registry လေ့လာခြင်း အပိုင်း (၁)
03:25 Registry, Technique No comments
Windows ရဲ့ Setting တွေအတော်များများကို ကျွန်တော်တို့ဟာ Control Panel ကနေတဆင့် ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ User များအတွက် လွယ်ကူနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Windows ဟာ သူ့အတွက် ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုမျိုးကို Control Panel ကနေပြင်ဆင်ခွင့် မပြုပါဘူး။ မှားယွင်းပြင်ဆင်မိမှာ စိုးတဲ့အတွက် Windows O.S အတွက် အရေးပါတဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေကို Registry ကနေသာ ပြင်ဆင်ခွင့် ပြုပါတယ်။
Windows O.S ရဲ့ Registry ဆိုတာ O.S နဲ့ စက်ရဲ့ Application, Hardware, Software, Device Driver & Network Protocol တွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် အစုအဝေးပါ။
Registry ထဲမှာ အဓိက ပါဝင်မှုတွေကတော့
-Device & Application များရဲ့ Setup Progarm များ
-NTLDR (Windows ကို load ပေးတဲ့ Program)
သူ့မှာတော့ Branch (5) ခုရှိတယ်။ အဲ့ဒီ ငါးခုကို High level key (or) Sub key(or) Main key လို့ ခေါ်တယ်။ သူ့ အောက်မှာလည်း နောက်ထပ် Sub key တွေ ရှိပြီးတော့ အောက်ဆုံးအဆင့် မှာ Value တွေရှိတယ်။ Value တွေမှာလည်း Value name တွေ ရှိပြီးတော့ Assign လုပ်ထားတဲ့ Data & Data Type တွေရှိတယ်။ အဲ့ဒီ High level key (or) Sub key (or) Main key တွေ ကတော့ -
-လက်ရှိ log on ၀င်ရောက်နေတဲ့ user နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကိုဖော်ပြပေးတယ်။
- Software နှင့် ၄င်း Software တွေ မည်သို့ ဖွဲ့စည်းထားသည်ကို ဖော်ပြပေးတယ်။
- ၄င်းသည် -HKEY_LOCAL_MACHINE ၏ Sub key နှစ်ခုဖြစ်သော Software & System မှ Data များကို ထုတ်နှုတ်ဖော်ပြပေးတယ်။
-လက်ရှိ Log on ၀င်ရောက်နေသော User ရဲ့ ID & Log on Screen ကို တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကိုပြတယ်။
- O.S စတင်တက်ရန် လိုအပ်သော Device များ၊ Device Driver များနဲ့သက်ဆိုင်သော Data များအပါအ၀င် ကွန်ပျူတာနဲ့ သက်ဆိုင်သော Data Configuration များကိုပြပေးတယ်။
- မတူညီသော User များ Log on ၀င်ရောက်နေစဉ်တွင် ၄င်း ရဲ့ အချက်အလက်တွေကို
(အထက်ပါ Sub Key ငါးခုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Registry မှာ အဓိက Sub key က နှစ်ခုပဲရှိတာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ -HKEY_USERS အောက်မှာ -HKEY_CURRENT_USER , -HKEY_LOCAL_MACHINE အောက်မှာ -HKEY_CURRENT_CONFIG & -HKEY_CLASSES_ROOT ရှိနေပါတယ်။)
Registry ကို Hive လို့ခေါ်တဲ့ ဖိုင် ငါး ခုထဲမှာ သိမ်းထားတယ်။ အဲ့ဒါ တွေကတော့
လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ Logical အပိုင်းကိုပဲ အသုံးပြုပြီးတော့ Physical ပိုင်းကိုတော့ နားလည်ရုံဆို အဆင်ပြေပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ Registry ဆိုတာကို Run ကနေ regedit ရိုက်ပြီး ခေါ်ကြည့်ကြပါတယ်။ သူဘယ်မှာနေတယ်၊ သူ့အချက်အလက်တွေကို ဘယ်မှာသိမ်းထားတယ် ဆိုတာကို သတိမပြုမိကြပါဘူး။ သူနေတဲ့ လိပ်စာကတော့ %System Root%\_System32\_Config ထဲမှာနေပါတယ်။ %System Root% ဆိုတာကတော့ System File တွေရှိတဲ့ C:\_Windows ကိုဆိုလိုတာပါ။ လိပ်စာ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Windows XP အတွက် C:\_Windows\_System32\_Config ထဲမှာတွေ့ နိုင်ပါတယ်။ Windows OS ဟာ Registry ကို Automatic Backup လုပ်ပေးပြီးတော့ Backup File တွေကို %System%\_Repair ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။
ကဲကျွန်တော်တို့ Registry ကိုသိပြီ။ နားလည်ပြီ.
သူ့ ဆီကို သွားကြရအောင်။
Start Menu> Run (Win+R) ကိုသွားပါ၊ နောက်ပြီး Run dialog box ပေါ်လာရင် regedit လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ရင် Registry Editor ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Registry Editor Dialog box မှာဆိုရင် ဘယ်ဖက်က Navigation Area မှာ High level key (or) Sub key (or) Main key လို့ခေါ်တဲ့ Registry ရဲ့ အဓိက Branches ငါးခုကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ၊ ညာဖက်က Topic Area မှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ Registry Value အောက်က Data တွေကို ပြသမယ့် Data Name, Data Type နဲ့ Data အမျိုးအစားတွေကို ပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာ ပြောပြထားသလို Value တစ်ခုမှာရှိတဲ့ Data တစ်ခုကိုဖော်ပြတဲ့ နေရာမှာ Data type အမျိုးအစား (၆)မျိုးအနက်က တစ်ခုခုနဲ့ ဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ (၆) မျိုးကတော့ ...........
Raw Binary Data, Hardware သတင်းတွေကို ကွန်ပျူတာမှ binary အဖြစ်သိမ်းပေမယ့်၊ Registry editor မှာ အကျဉ်းခြုံးရန် Hexa Decimal နဲ့ ပြပေးတယ်။
4 byte အရှည်ရှိတဲ့ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ သိမ်း၊ Device Driver များ၊ Service နှင့် သက်ဆိုင်သော ကန့်သတ်ချက် (parameter) များကိုဖော်ပြပေးတယ်။
multiple type, user များသိနိုင်သော Char နှင့် ဂဏန်းများရောနှောပုံ၊ နေရာလွတ်၊ ကော်မာနဲ့ အခြားအမှတ်တွေပါ။
စာသားများပါဝင်ပြီး အလျား သတ်မှတ်ချက်ရှိသော အက္ခရာစဉ်ကိန်းတန်း တစ်ခု။
Hardware တစ်ခုကို (Driver တစ်ခု) Resource List ကိုသိမ်းဆည်းရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော Nested Array တစ်ခု။
Registry ကို လေ့လာတဲ့ နေရာမှာ စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်လို့ ပထမဦးစွာ အနေနဲ့ Windows ရဲ့ Registry ကို Backup လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်။ Registry ဟာ Windows ရဲ့ ဦးနှောက် ဖြစ်တာကြောင့် တစ်စုံတစ်ခု ပျက်စီး ချို့ယွင်းသွားခဲ့ ရင် Windows မတက်တဲ့ အထိ ပြသနာ ရှာတတ်ပါတယ်။
ကဲ အခု Windows မှာ အသင့် ပါလာတဲ့ Backup or Restore Wizard ကို အသုံးပြုပြီး Registry ကို backup & restore လုပ်ရအောင်..............
Backup & Restore Wizard Dialog box ကျလာပါလိမ့်မယ်...... အဲ့ဒီ Welcome Page ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Advance Mode ဆိုတဲ့ အပြာရောင် စာသားကို နှိပ်လိုက်ရင် Backup Utility Box ထပ်ကျလာပါမယ်။ အဲ့ဒီအထဲကမှ Backup Tab ကိုရွေးလိုက်ပြီးရင် ဘယ်ဘက် ခြမ်းရှိ My Computer အောက်က System State Check box ကို အမှန်ခြစ်ကလေး ခြစ်ပြီး အောက်ဆုံးက Backup Media or File Name box မှာ Backup လုပ်မယ့် ဖိုင်ကို သိမ်းမယ့် နေရာနဲ့ ဖိုင် အမည်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် Browse ကိုနှိပ်ပါ။ Save as Dialog box ကျလာတဲ့ အခါ Backup ဖိုင်ကို မိမိ သိမ်းလိုတဲ့ နေရာ(Folder) ကို ရွေး၊ အမည်ပေးပြီးတော့ Save လုပ်ပါ။
နောက်ပြီးတော့ Start Backup ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် Backup Job Information Dialog box ကျလာပြီး Start Backup ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Backup လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ "The Backup is complete" ဆိုတဲ့ စာသားပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Progress Box ကို ပိတ်ဖို့အတွက် Close ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Backup Utility Box ကို ထပ်ပိတ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Registry တစ်ခုလုံးကို Backup လုပ်တဲ့ အဆင့် ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
Registry ကို ပြုပြင်တာ (လက်ဆော့တာ) ပြီးဆုံးသွားလို့ နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Backup လုပ်ထားတဲ့ File ကို ပြန်ပြီး Restore လုပ်ပေးရပါတယ်။ Restore လုပ်ချင်ရင်တော့ ခဏက Backup လုပ်ထားတဲ့ file ကို double click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Backup & Restore Wizard Dialog box ကျလာပါလိမ့် မယ်...... အဲ့ဒီ Welcome Page ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Advance Mode ဆိုတဲ့ အပြာရောင် စာသားကို နှိပ်လိုက်ရင် Backup Utility Box ထပ်ကျလာပါမယ်။
အဲ့ဒီအထဲကမှ Restore and Menage Media Tab ကိုရွေးလိုက်ပါ။ ညာဖက်မှာ file ကိုဖြန့်ချထားပြီး System State ကို အမှန်ခြစ်ထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ Backup ဖိုင်ကို မူလနေရာမှာပဲ ပြန်ပြီး Restore လုပ်မှာမို့လို့ Start Restore ကိုနှိပ်ပေးပါ။ မူလရှိပြီးသားကို ဖျက်ပြီးရေး မယ်လို့ သတိပေးတဲ့ Warning Box ကျလာမှာဖြစ်ပြီး OK ကိုနှိပ်လိုက်ရင် Confirm Box ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ (တော်တော် အမေးအမြန်းထူတယ်နော်...) OK ကိုပဲထပ်နှိပ်လိုက်ပါ။
Restore Progress Box ထပ်ကျလာပြီး Restore လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ "The restore is complete" ဆိုတဲ့ စာတန်းပေါ်လာရင် close ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ။ တစ်ချို့ setting တွေဟာ restart ချမှ ပြည့်စုံမှာမို့လို့ Restart ချမလားလို့မေးတဲ့ dialog box ကျလာပါလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ Windows Restart ကျသွားပြီးတော့ နဂိုမူလအတိုင်း (မပြင်ဆင်ချိန်က အခြေအနေမျိုး) ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
အခြားအခြားသော Registry Software တွေအသုံးပြုပြီး Backup & Restore လုပ်လို့လည်းရပါတယ်။ ဥပမာ- CCleaner, Power, Blue စသည်ဖြင့်ပေါ့
အပိုင်း (၂ ) ဆက်ပါအုံးမယ်...